‘छक्का पञ्जा ४’ मा श्रृंखला हिरोईन ? पूरा भिडीयो हेर्नुस – Rastriyapatrika
‘छक्का पञ्जा ४’ मा श्रृंखला हिरोईन ? पूरा भिडीयो हेर्नुस
मिस नेपाल २०१८ श्रृंखला खतिवडालाई ‘छक्का पञ्जा ४’ को हिरोइन बन्न प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशक दिपाश्री निरौलाले श्रृंखलालाई छक्का पञ्जा को चौथो श्रृंखलामा नायिकाको लागि प्रस्ताव राखेकी हुन् । भिडियो हेर्नुस :
भर्खरै मिस वल्र्डमा सहभागी भएर फर्किएकी श्रृंखला सोमबार मुन्द्रेको कमेडी क्लवमा पाहुन बन्न गएकी थिइन् । उक्त शोमा अध्यक्षको रुपमा रहेकी दिपाश्रीले श्रृंखलालाई छक्का पञ्जा ४ को लागि ढोका खुला रहेको कार्यक्रममै बताइन् । तर नेपाल सुन्दरीले क्यामेरा अगाडी अभिनय गर्ने आफ्नो रहर नरहेको जवाफ दिइन् ।
‘छक्का पञ्जा ४ को लागि मैंले त अफर पनि गरिसकें’, दिपाश्रीले कार्यक्रम सकिएपछि मिडियासँग भनिन् । तर दिपाश्रीको यस प्रकारको प्रस्तावमा श्रृंखलाको जवाफ अचम्मको आयो । ‘म फिल्म हेर्न चाहिं पहिलो दिनमै आउँछु । तर फिल्म खेल्ने रहर चाहिं छैन्’, श्रृंखलाले हाँस्दै भनिन् ।
व्युटि विथ प्रपस र मल्टिमिडिया गरी मिस वल्र्डमा दुई वटा अवार्ड जितेकी श्रृंखलाले मोडलिंग र अभिनयमा आफ्नो ईच्छा नभएको बताउँदै आएकी छिन् । कतै पुर्व मिस नेपालको असफलताले त श्रृंखलाले यस क्षेत्रमा ईच्छा नदेखाएकी होइनन् ?